We.com.mm - သင်္ကြန်မှာရေဘယ်လောက်စိုစို ဆံပင်ပုံမပျက်ပဲတစ်နေကုန်ကဲလို့ရမယ့် ဆံပင်စတိုင်လ်သုံးမျိုး
သင်္ကြန်မှာရေစိုတာနဲ့ ဆံပင်ပုံကပျက်သွားတော့ အလှလည်းပျက်တယ်လေ...။ မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့က မျက်နှာပဲအလှမပျက်လို့မဖြစ်ဘူး... ဆံပင်လည်းပုံစံမပျက်လှနေမှဖြစ်မှာ...။ ဒီတော့ ကျစ်ဆံမြီးလေးတွေသာကျစ်ထားမယ်ဆိုရင် ရေဘယ်လောက်ဆော့ဆော့၊ ရေဘယ်လောက်စိုစို ဆံပင်ပုံလည်းမပျက်တော့ဘူးလေ...။ အရင်ထဲက သင်္ကြန်နီးပြီဆိုရင် ကျစ်ဆံမြီးသေးသေးလေးတွေကို အများကြီးကျစ်ကြတယ်....။ ဒါပေမယ့် အခုခေတ်မှာက ဒီလိုကျစ်ဆံမြီးသေးသေးလေးတွေကျစ်တဲ့ခေတ်က ကုန်သွားပါပြီ...။ ဒါကြောင့် ကျစ်ဆံမြီးကိုမှ သင်္ကြန်နဲ့လိုက်ဖက်ပြီး ဆံပင်ပုံမပျက်လှနေစေမယ့် ကျစ်ဆံမြီးကျစ်နည်း သုံးမျိုးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
၁. ပထဆုံးအနေနဲ့ ဆံပင်အရှေ့လေးကိုနည်းနည်းချပြီး ဘေးကနေကျစ်ဆံမြီးကျစ်ပေးရပါမယ်။ နှစ်ဖက်လုံးကိုကျစ်ပေးပြီး ကျစ်ထားတာလေးတွေကို ဆံစနည်းနည်းစီဆွဲထုတ်ပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း အနောက်မှာစုချည်ပေးလိုက်ရုံပဲနော်...။
နောက်ထပ်အရှေ့ကဆံပင်လေးတွေကိုလည်း ကျစ်ဆံမြီးအသေးလေးထပ်ကျစ်ပေးရပါမယ်။ ခုနကလိုပဲ နှစ်ဖက်လုံးကိုကျစ်ပြီး အနောက်မှာစုစည်းပေးပါ။ အားလုံးပြီးရင်တော့ ဆံပင်အားလုံးကိုစုစည်းပြီး ကျစ်ဆံမြီးမှာချည်ထားတဲ့ သားရေကွင်းတွေကိုဖြည်လိုက်လို့ရပါပြီ...။
ပိုပြီးလှလှလေးဖြစ်သွားအောင် စုစည်းထားတဲ့သားရေကွင်းနေရာမှာ အပေါ်ကနေ ဆံပင်လေးနဲ့ပြန်ပတ်ပြီး ကလစ်ထိုးလိုက်လို့ရပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ သင်္ကြန်မှာဆံပင်ပုံမပျက်ပဲ လှနေမှာပါ။
၂. နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ကတော့ ဆံပင်ကိုနှစ်ဖက်ခွဲပြီး ထိပ်ကနေယူကာ အောက်နားထိရောက်အောင် ကျစ်ဆံမြီးကျစ်ပေးရပါမယ်။ ဒီလိုကျစ်တဲ့အခါမှာ အနောက်နားကဆံပင်ကို နည်းနည်းလေးချန်ထားပေးပါ။
နှစ်ဖက်လုံးကိုကျစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ အနောက်မှာချန်ထားတဲ့ဆံပင်ကို ကျစ်ထားတဲ့ကျစ်ဆံမြီးကြားလေးတွေထဲ လိုက်ထည့်ပေးရမှာပါ။ လုပ်နည်းလေးကိုတော့ ပုံလေးတွေနဲ့သေချာကြည့်ပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ ကြိုးနဲ့စုစည်းလိုက်ပါ။
ပိုပြီးခိုင်ခံ့နေအောင် ကလစ်လေးတွေနဲ့လိုက်ထိုးပေးပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ ဘယ်လောက်ရေစိုစို ဆံပင်ပုံမပျက်တော့တဲ့အတွက် ကဲချင်သလောက်ကဲလို့ရတယ်နော်...။ ဒီဆံပင်ပုံစံလေးဆိုရင် နေကာမျက်မှန်လေးတွေနဲ့လည်း အရမ်းလိုက်ပါတယ်။
၃. နောက်ဆုံးတစ်မျိုးကတော့ ခုနကလိုပဲကျစ်ဆံမြီးနှစ်ဖက်ကျစ်ပြီး စည်းလိုက်ပါ။ ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ ကျစ်ဆံမြီးကိုအောက်နားထိကျစ်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးနော်...။ ဂုတ်နားထိပဲကျစ်ပေးရမှာပါ။ ပြီးမှသာ ကျန်တဲ့အောက်နားကဆံပင်တွေကို ကျစ်ဆံမြီးဆက်ကျစ်ပေးရမှာပါ...။ ဒီကျစ်ဆံမြီးကတော့ ဆံပင်ကိုနည်းနည်းစီယူယူပြီး ကျစ်ပေးရမှာနော်...။
ဒီဆံပင်ပုံစံလေးဆိုရင်လည်း အားလုံးကိုကျစ်ဆံမြီးကျစ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ရေဘယ်လောက်စိုစို၊ ဘယ်လောက်ကဲကဲ ဆံပင်ပုံမပျက်၊ အလှမပျက်တော့ဘူးနော်...။
အခုမျှဝေပေးလိုက်တဲ့ ဆံပင်ပုံစံသုံးမျိုးလုံးက မိန်းကလေးတိုင်းအတွက် အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်လို့ သင်္ကြန်မှာကဲချင်တိုင်းကဲလို့ရပြီနော်...။
ဆွယ်တာအင်္ကျီတွေကို ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးနဲ့တွဲဖက်ဝတ်ဆင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ
အသားအရေလေးချောမွေ့နေစေဖို့ ညဘက်တိုင်းမှာလုပ်ပေးသင့်တဲ့ အုန်းဆီ Face Mask…
မျက်နှာပေါ်မှာ တင်းတိပ်၊ မှဲ့ခြောက်နဲ့ အမဲစက်တွေ ကင်းစင်စေမယ့် နည်းလမ်းများ